Home News Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo tacsi u diray Soomaaliland kadib geeri ku...
Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo tacsi u diray Soomaaliland kadib geeri ku timid Taliyihii Cadanka Booliska Maamulkaa
Xukuumadda Somaliya ayaa waxay ka tacsiyadeysay geerida ku timid Taliyihii Ciidanka Booliska Somaliland, General Cabdillaahi Fadal Iimaan, oo xalay ku geeriyooday Magaalada Hargeysa.
Taliyaha oo maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanaayay Magaalada Hargeysa ayaa xalay ku geeriyooday Isbitaalka International ee Magaalada Hargeysa.
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook kaga tacsiyadeeyay geerixa ku timid Taliyihii Ciidanka Booliska Somaliland.
“Waxaan ka tacsiyadeynayaa geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Alle ha u naxariistee taliyihii ciidanka Booliska Somaliland, Cabdillaahi Fadal Iimaan. Qabriga Allahe ha u waasiciyo, Qoyska, carruurta uu ka baxay iyo dhammaan shacabweynaha reer Somaliland iyana samir iyo iiman Alle haka siiyo.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka.
General Fadal ayaa tan iyo sanadkii 2012 ahaa Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland, ka dib markii uu geeriyooday Taliyihii isaga ka horeeyay ee General Maxamed Saqadhe Dubbad.
Jananka ayaa waxaa maanta lagu wadaa in lagu aaso Magaalada Hargeysa, waxaana aaskiisa la fillayaa in ay ka qaybgalaan Madaxda Somaliland.